Tuesday April 07, 2020 - 12:01:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerar askar badan lagu dilay ayaa markale ka dhacay wadanka Maali ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika.
Ugu yaraan 25 askari oo katirsan melleteriga xukuumadda Maali ayaa dhintay tira kalane dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii weerar xoog kugal ah uu lakulmay saldhig melleteri oo kuyaal waqooyiga wadankaas.
Wararka ka imaanaya waqooyiga Maali ayaa sheegaya in xoogag jihaadiyiin ah ay weerar aad uqorshaysan ku qaadeen saldhig kuyaal degmada Pampa oo hoos tagta magaalada Gaawa, saraakiil katirsan xukuumadda Maali ayaa warbaahinta u sheegay in xoogag aad u hubaysan oo weerar ku kediyeen saldhigga ciidanka.
"Kooxo Argagaxiso ah ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday saldhigga ciidanka ee degmada Pampa waxayna dileen ugu yaraan 20 askari" sidaas waxaa yiri sarkaal ciidan wuxuuna intaas sii raaciyay in dagaalyahannada weerarka qaaday ay burburiyeen saanado melleteri kuwa kalane ay rarteen.
Mas'uul kale oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in khasaaraha dhimasho ee askarta kasoo gaaray weerarka uu ka badanyahay 25 askari.
Weerarkan aadka u xooggan ayaa ka dhacay degmo hoostagta magaalada Gaawa oo caasimad u ah waqooyiga Maali, badanaa weerarada nuucaan ah waxaa geysta dagaalyahanada jamaacada Ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ee magacooda loosoo gaabiyo JINM waana jamaaco ku xiran Ururka Al Qaacidda.